IChiefs ingase imangalele uKhune | News24
IChiefs ingase imangalele uKhune
Johannesburg – IKaizer Chiefs ibheka ukuhlawulisa unozinti wayo, u-Itumeleng Khune, ngokusayina isivumelwano sokukhangisa imikhiqizo engazange athole imvume ekilabhini, ngokusho kwemibiko.
UKhune waba ngomunye wabadlali abahola kakhulu eNingizimu Afrika ngenkathi esayina inkontileka entsha namaGlamour Boys ngoJulayi kunyaka ka-2015, futhi kubukeka sengathi inkontileka yakhe iyamvimbela ekusayineni nabaxhasi abasha ngaphandle kokunikwa imvume yiqembu.
Ngokombiko we-Sunday World, lo mdlali oneminyaka engu-29 ubudala ubhekene nokumangalelwa ngokwezomthetho yile kilabhu emuva kokusayinda isivumelwano neDanup yogurt.
UKhune ubelokhu ebonakala eseka lo mkhiqizo emakhasini akhe ezinkundla zokuxhumana.
OLUNYE UDABA: Imaneja ichitha okushiwo iChiefs ngoKhune
“UKhune uphule inkontileka yomsebenzi neChiefs ngokuthi asayine isivumelwano sokukhangisa ngaphandle kwemvume yeChiefs,” kusho umthombo ongafunanga ukudalulwa njengoba ucashunwe kuleli phephandaba.
“Uyimpahla yekilabhu futhi akakwazi ukuhambe eseka imikhiqizo engahambisani nekilabhu, ngaphandle kwezibusiso zekilabhu.”
Okunye okuthiwa kucasule kakhulu abaphathi beKaizer Chiefs ukuthi uKhune wathatha isithombe nozakwabo kuleli qembu, uKeagan Buchanan kanye noGeorge Maluleka, nalapho babekomunye umcimbi wokukhangisa ngalo mkhiqizo.
Okhulumela iDanone, uSandra Dorville, unqabile ukudalula eminye imininingwane ngenkontileka abanayo nalo nozinti weBafana Bafana, wathi isivumelwano sabo asibavumeli ukuba badalule okuqukethwe kule nkontileka.